Fampianarana ambony :: Hitohy ny fitsirihana ireo manao diplaoma sandoka • AoRaha
Fampianarana ambony Hitohy ny fitsirihana ireo manao diplaoma sandoka
Hotohizana ny fanadiovana ny tontolon’ny fampianarana ambony.
Taorian’i Mahajanga dia hatao any amin’ireo oniversite hafa ihany koa ny fanaovana fitsirihana ireo olona manao diplaoma sandoka.
Efa misy ny rafitra mipetraka eny anivon’ny rantsamangaikan’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony ny amin’ny fanohizana an’izany fitsirihana izany. “ Efa nisy ireo tratra nanao diplaoma sy taratasy mirakitra ny naoty tsy ara-dalàna tra-tehaka”, hoy i Rejo Fienena Félicitée, minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, nandritra ny fanaovan-tsonia fiaraha-miasa teo aminy sy ny orinasa Telma mahakasika ny famatsiana “internet” ireo oniversite enina eto amintsika , omaly.
Tsy handefitra manoloana io zava-mitranga io ny minisitera. Efa misy rafitra napetraka natokana hiady amin’ity hosoka mihamahazo vahana ity, raha ny fantatra. Hivelatra any amin’ny sehatry ny fanabeazam-pirenena ihany koa izao fitsirihana ireo mpanao kolikoly izao. Ho hita aorian’izany ireo rehetra nampiasa mari-pahaizana tsy izy, na efa amin’ny sehatry ny asa aza.
“Mampitandrina ireo izay mikasa sy efa nanao izany izahay. Ny fahaizana sy faha- lalana ihany no hahatafidirana eny anivon’ny Anjerimanontolo sy hahazoana asa”, hoy ny fanampim-panazavan’ny minisitra.
Tsy fandriamphalemana :: Ahenoana feona kiririoka isak’alina eny Ampitatafika